अन्तर्राष्ट्रिय समाजबाट किन एक्लिँदैछ अमेरिका? - Jagaran Post
जागरणपोस्ट ९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:५७ विचार / दृष्‍टिकोण
अक्टोबर १४ तारिख एप्पलले आफ्नो पहिलो फाइभ जी मोबाइल फोन अर्थात् आईफोन-१२ सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकी प्रविधिको धज्जी उडेको छ। आईफोन-१२ मोबाइल फोन बजारमा आएपछि अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले स्मार्ट फोनमा राज गरिरहेको एप्पलमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
अमेरिकी संचारमाध्यमका अनुसार फाइभ-जी नेटवर्कको गति परीक्षण गर्दा आईफोन-१२ को क्षमता फोर-जीको तुलनामा खासै परिवर्तन नदेखिएपछि प्रश्न उठेको हो। प्राविधिक रुपमा परीक्षण गरेर यथार्थता बाहिर आएपछि उपभोक्तालाई ठगी गर्ने अमेरिकी योजनाको पर्दाफास भएको छ र अमेरिकी प्रविधिमाथि अमेरिकाकै संचारमाध्यमले चिसो पानी खन्याइदिएका छन्।
अमेरिकाभरि फाइभ-जी नेटवर्कको गतिमा पनि खासै वृद्धि भएको छैन। केही ठाउँमा त फाइभ-जीको गति फोरजीकोभन्दा ढिलो भएको देखिन्छ। अमेरिकी सञ्चार माध्यमले यस्तो निश्कर्ष प्राप्त गरेका छन् कि प्रायः अमेरिकीहरुका लागि फाइभ-जी नेटवर्कको अवस्थामा आईफोन-१२ ले फाइभ-जीमा तुरून्तै काम गर्न सक्दैन। सञ्चार माध्यमले यसलाई “गाउँको बाटोघाटोमा फरारी कार कुदाएको’ भनी व्यङ्ग्य गरेका छन्। यसको अर्थ के हो भने अमेरिकामा फाइभजी नेटवर्क चलाउनका लागि कुनै पूर्वाधार तयार गरिएको छैन।
मोबाइल नेटवर्कको आधिकारिक गति मापन कम्पनीको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म अमेरिकी फाइभ-जी नेटवर्कको गति विश्वमा अन्तिम दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अमेरिकी फाइ-जी नेटवर्कको पछाडि पूर्वाधार मात्र नभइ मापदण्डको निर्माणदेखि प्रतिलिपि आवेदन र उपकरणको निर्माण सबै पक्षमा चीनभन्दा धेरै पछि परेको कुरा एउटा निर्विवाद तथ्यका रुपमा रहेको छ।
सधैँ सबै क्षेत्रमा पहिलो नम्बरमा रहन चाहने अमेरिका फाइभजीमा पछि पर्नाको मुख्य कारण के हो? डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि उनले अमेरिकालाई ध्वस्त बनाउने कार्य गरिरहेका छन्। चीनसँगको व्यापार युद्धमा अमेरिकालाई धेरै क्षति पुगेको छ। चिनियाँ सामानमाथि गरिएको भन्सार वृद्धिले अमेरिकीहरुले महङ्गोमा सामान किन्नु पर्ने वाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर अमेरिकाको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुँदै गएको छ। अमेरिकामा फाइभजी नेटवर्क प्रविधिको हुर्मत हुनु यसैको एउटा उदाहरण हो।
अमेरिकी सरकारले अनुसन्धानद्वारा आफ्नो प्रविधिको विकास गर्न त सकेन नै जनतालाई सेवा दिनका लागि अझ राम्रो प्रविधि भित्र्याउन पनि तयार छैन। किनभने विश्वमा फाइभजी नेटवर्क प्रविधिको विकासमा चीनको ह्वाह्वे कम्पनीको वर्चश्व रहँदै आएको छ। ह्वाह्वे त्यही कम्पनी हो जसको प्राविधिक क्षमतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर अमेरिकाले विभिन्न आरोप लगाउँदै चिनियाँ प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ। ह्वाह्वेमाथि अमेरिकाले लगाएका आरोपहरु कपोलकल्पित र हाँस्यास्पद रहेका छन्। अमेरिकाले ह्वाह्वेमाथि कहिले इरानलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँछ भने कहिले ह्वाह्वे कम्पनीमा चीन सरकारको स्वामित्व रहेको फत्तुर कुरा गर्छ। विश्वको निगरानी गरेर आफ्नो अधिपति कायम राख्नका लागि हतियार र युद्धको व्यापार गर्ने अमेरिका टेलिकम नेटवर्कको एउटा कम्पनीमाथि जासुसी गर्ने निराधार आरोप लगाउनमै समय खर्च गरिरहेको छ। अमेरिकाको निर्देशनमा क्यानडाले ह्वाह्वे कम्पनीकी प्रमुख वित्तीय अधिकृत मेङ वान्चौलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ। मेङलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्नका लागि अमेरिकाले क्यानाडामाथि थप दवाब दिइरहेको छ।
अमेरिका जस्तो विश्वकै सबैभन्दा विकसित मुलुकले अनुचित प्रशासनिक कदम चालेर आधुनिक युगमा पनि प्रविधिको प्रतिस्पर्धा दबाउने नीति छनोट गर्नु उदेकलाग्दो छ। उसले निराधार रूपमा चीनको ह्वाह्वे कम्पनीमाथि नाकाबन्दी लगाएको कुरा विश्वलाई अवगत छँदैछ। यसका अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लगायतका राजनीतिज्ञहरूले अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीनको बदनाम गर्न न्वारानदेखिको बल प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेछन्। यसै वर्ष अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले युरोप, मध्य पूर्व र ल्याटिन अमेरिकाको भ्रमण गर्दा विभिन्न चीनको फाइभ-जी प्रविधिलाई अस्वीकार गर्न ती मुलुकहरुलाई उक्साएका थिए।
अमेरिकाले आफ्ना गठबन्धन मुलुकबाहेक चीनका छिमेकी मुलुकहरु दक्षिण कोरिया र जापानलाई पनि आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम हमला गरेर जापानलाई ध्वस्त बनाएको अमेरिकाले दक्षिण कोरियमा क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली ‘थाड’ स्थापना गरेको छ। अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई निगरानी गर्नका लागि थाड स्थापना गरेको भने पनि त्यसको मुख्य लक्ष्य चीन भएकाले थाड हटाउन चीनले ताकिता गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय जापानलाई अमेरिकाले कठपुतली बनाएको छ भने दक्षिण कोरियामा पनि अमेरिकी सैनिक तनैथा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि जापान र दक्षिण कोरियाले फाइभजी नेटवर्क प्रविधिमा चीनको समर्थन गरेका छन्। जापानी सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार, जापानी र दक्षिण कोरियाली चिनियाँ कम्पनीलाई दूरसंचार नेटवर्क निर्माण कार्यबाट अलग्याउने अमेरिकी योजनामा दुवै राष्ट्र सामेल नहुने बताएका छन्।
जापानी योमिउरी सिन्बुन समाचारपत्रले अक्टोबर १६ तारिख जापानका केही सरकारी पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सम्प्रेषण गरेको समाचार अनुसार, चिनियाँ ह्वाह्वे कम्पनीलाई दूरसंचार नेटवर्कबाट अलग्याउने अमेरिकाको योजनामा जापान संलग्न नहुने भएको छ। त्यसको ठीक दुई दिन अगाडि अक्टोबर १४ तारिख आयोजित दक्षिण कोरिया-अमेरिका रणनीतिक तथा आर्थिक वार्तामा दक्षिण कोरियाली कम्पनीको निर्णयमा चिनियाँ कम्पनी ह्वाह्वेलाई दक्षिण कोरियाको फाइभ-जी नेटवर्क निर्माणबाट अलग्याउने अमेरिकी मागलाई दक्षिण कोरियाली पदाधिकारीले अस्वीकार गरेका थिए। अमेरिकी राजनीतिज्ञले आफ्नो स्वार्थको लागि संगाती मुलुकमा दबाब दिए तापनि उसका यस्ता कार्य पटक पटक विफल हुँदै आएका छन्। वर्तमान विश्व बहुपक्षवाद, साझा विजय र हितको समर्थन गर्ने युग हो। एक्काईसौँ शताब्दीको विश्वव्यापीकरण युगमा अमेरिकी दबाब र हतियारको कूटनीति विफल हुँदै गएको छ।
चीनसँगको व्यापार युद्धभन्दा अगाडिदेखि नै अमेरिकाले विश्वमा थिचोमिचो र बलमिच्याइ गर्दै आएका कयौँ उदाहरणहरु छन्। चीन बिरोधी मोर्चामा मात्र होइन अमेरिकाले इरान, भेनेजुएला, सिरिया, उत्तरकोरिया आदि मुलुकमाथि नाकाबन्दी गर्नका लागि अन्य मुलुकमाथि दबाब दिँदै आएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालमाथि पनि चीनको बीआरआईलाई अस्वीकार गरी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा भागका रुपमा रहेको एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालमाथि दबाब दिँदै आएको कुरा कतै छिपेको छैन। गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणताका तयारी अवस्थामा रहेको नेपाल चीन सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर रोक्नका लागि पनि अमेरिकाले नेपालमाथि दबाब दिएको कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ।
अहिले विश्व कोरोना महामारीका विरुद्धमा लडिरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा चीनले अवलम्बन गरेका तरिकालाई विश्वका प्राय मुलुकले अनुसरण गर्दै आएका छन्। अमेरिकाले भने आसन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनको राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि चीनको बदनामी गर्ने काममा सम्पूर्ण तागत खर्च गर्दै आएको छ। अमेरिकाले आफ्नो मुलुकमाथि कोरोना महामारीलाई रोक्न नसकेको मात्र होइन कतिपय मुलुकमाथि उसले लगाएको नाकाबन्दीका कारण त्यहाँका नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नै हनन भएको छ। मानवअधधिकारको कथित ठेकेदार अमेरिकाले इरान, क्युबा, भेनेजुएला लगायतका मुलुकमाथि लगाएको नाकाबन्दीका कारण अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति हुन सकेको छैन। यस्तो नाकाबन्दी रद्द गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समाजले गरेको मागका बाबजुद अमेरिकी राजनीतिज्ञले नाकाबन्दीलाई थप कसेर मानवीय संकट निम्त्याइरहेका छन्। वास्तवमा अमेरिकीहरु यतिबेला मान्छेका नभई भाइरसका सहयोगी बनेका छन्।
अमेरिकाले एकल मुलुकमाथि मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमाथि पनि दबाब र धम्की दिँदै आएको छ। कोरोना महामारी फैलिएपछि अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई बारम्बार धम्की दिँदै संरचनागत परिवर्तन गर्न माग गरेको थियो। उसले संगठनबाट हट्ने र त्यस्तै संस्था गठन गर्ने दबाब पनि दिइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको अनुदान सहयोगलाई पनि अमेरिकाले रोकेको छ। अमेरिकाको यस्तो बलमिच्याइँ कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महामारी प्रतिरोध कार्यलाई गम्भीर रुपमा असर परेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्दै आएको छ। अमेरिकी विश्लेषककै निचोड हेर्ने हो भने पनि यतिबेला बल प्रयोग गर्ने अमेरिकी कूटनीतिक कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी र बहुपक्षीयतावादको नियमलाई भङ्ग गर्ने सबैभन्दा ठूलो पक्ष अमेरिका नै बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अमेरिकी राजनीतिज्ञले बारम्बार अन्य मुलुकमाथि धम्की दिइरहने कार्यले उसको प्रभुत्ववाद तथा शक्तिको राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ। कोरोना फैल्याएकोमा चीनले त्यसको दायित्व लिनुपर्ने भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रमको भनाइ उल्टो सिद्ध भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यलाई बारम्बार विफल बनाएकाले विश्वमा कोरोना महामारीको दायित्व अमेरिकाले लिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
कुनै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक ठूलो होस् वा सानो, शक्तिशाली होस् वा कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी क्षेत्रमा सबै समान हुन्छन्। अन्य पक्षबाट दिइएको धम्की कसैले पनि ग्रहण गर्ने इच्छा राख्दैन। बल मिच्याइपूर्ण नीतिले अति भए पछि अन्तर्राष्ट्रिय समाजबाट अमेरिका आफैँ अलगिने अवस्थामा भइसकेको एएफपीले लेखेको छ।
केही अमेरिकी राजनीतिज्ञहरुका लागि चीनले चेतावनी दिएको छ ‘यदि तिमी आफ्नो आँखा र कान बन्द गरेर प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्छौ भने अन्तत: तिमी आफैँलाई धोका दिनेछौ। तिम्रा सबै षड्यन्त्र र अनुचित तरिका अन्तत: सर्वसाधारणले बुझ्नेछन्। त्यतिबेला तिमी आफैँ नाङ्गिनेछौ।’ चीनको चेतावनीजस्तै अमेरिकाले निरन्तर अन्य मुलुकमाथि दबाब दिने कूटनीति अख्तियार गर्ने र बल तथा प्रलोभनको तरिका अपनाउँदै गएमा अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अमेरिका एक्लिने निश्चित छ।